Marketing Execuitve | Kyone Doe G M Company Limited ﻿
5.10.2019, Full time , FMCG
Company: Kyone Doe G M Company Limited
•	ဘွဲ့ရ သို့ ၁၀တန်းအောင်
•	အသက် ၃၅နှစ်အောက်
•	အထည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူ
Work location No.(22), (104) Street, Mingalar TaungNyunt.
•	At Miles Partnership, we hire smart people who are hardworking, resourceful, fun, friendly and driven to do more. We are passionate about travel and use the most effective, results-driven solutions to tell the stories of our destination clients and share experiences that inspire visitors.
144 Days, Full time , FMCG
•	Shopping Mall များ Wholesale Center ကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရမည်/ •	Sale & Marketing နှင့်ပတ်သက်သော Diploma/Certificate ရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ
•	စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဦးစားပေးမည်။ •	Sale & Marketing နှင့်ပတ်သက်သော Diploma/Certificate ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	မော်တော်ယာဉ်ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းတတ်ရမည်
•	စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဦးစားပေးမည်။ •	Sale & Marketing နှင့်ပတ်သက်သော Diploma/Certificate ရှိသူဦးစားပေးမည်။
Marketing Execuitve Marketing & PR jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Kyone Doe G M Company Limited Marketing & PR jobs Marketing & PR jobs FMCG Jobs in Myanmar, jobs in Yangon